သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူတွေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ကို (နျူကလိယ accumbens ထားတဲ့အတွက် mesolimbic dopamine (DA) စနစ်, (NAc) ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍတစ်ဘုံအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံကယ်လီ, 2004) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးစွဲမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် putative အခန်းကဏ္ဍသော mesolimbic စနစ်, (အတွင်း neuroplasticity သွေးဆောင်Hyman et al ။ , 2006; Kauer နှင့် Malenka, 2007; Kalivas, 2009; ချန် et al ။ , 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010; ဝံပုလွေ, 2010a; Mameli နှင့် Luscher, 2011). ဒါဟာမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်ဟာ mesolimbic စနစ်အတူတူပင်အာရုံခံကိုသက်ဝင်ကြဘူးကြောင်း, ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများထူးခြားသက်ဝင်စေကြောင်းနှင့်ဤ circuit ကိုပြောင်းလဲပစ်တွေးဆထားသည် (ကင်မရွန်နှင့် Carelli, 2012). သို့ရာတွင်ထိုသို့သဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်သဘာဝကဆုလာဘ်များအကြားတစ်ခုဆက်စပ်မှုတွေအဘို့ခွင့်ပြုကြောင်းအလားတူနှင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနှစ်ဦးစလုံးအတွက် mesolimbic system ကိုထိခိုက်စေသည်ဟု ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်, အထူးသလိင်ဆုလာဘ်, နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများ (Frohmader et al ။ , 2010a; အိုး et al ။ , 2010a; Olsen, 2011).
ထို့ကြောင့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတူတူပင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံမသာ, သူတို့ကအတူတူပင်မော်လီကျူးပြုပြီအပေါ်ဆုံ (Nestler et al ။ , 2001; Wallace et al ။ , 2008; ခွံရှိ et al ။ , 2009; အိုး et al ။ , 2010b), နှင့် NAc အတွက်တူညီတဲ့အာရုံခံအတွက်ဖွယ်ရှိ (Frohmader et al ။ , 2010b), tဏပုမက်လုံးပေး salience သြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်ဆုလာဘ်နှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများ "လို" (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998).
လေ့လာမှုအပြည့်အစုံ - ဆွေးနွေးခြင်းအပိုင်း -
သဘာဝဆုလာဘ် abstinence တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်အခါလက်ရှိလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive သရုပ်ပြခဲ့သည်။ အထူးသကျနော်တို့ abstinence ၏7သို့မဟုတ် 28 ဃသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို, ပိုကောင်း Amph ဆုလာဘ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ထိုပေါက်ဖွားအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဦးထံမှ abstinence ကာလ၏ထူထောင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတူညီကြ (Lu et al, 2005; ။ သောမတ်စ် et al, 2008; ။ Wolf က, 2010b, 2012; ။ Xue et al, 2012) ။ ထို့အပွငျ, သဘာဝဆုလာဘ်-သွေးဆောင်? FosB အဆိုပါ NAc အတွက်ဆုလာဘ် abstinence တစ်ကာလအတွင်းအလားအလာဟာ NAc အတွက် spinogenesis ကနေတဆင့်, psychostimulant ဆုလာဘ်အပေါ်ကိုသဘာဝဆုလာဘ် abstinence ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive သက်ရောက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ကျနော်တို့ကသရုပ်ပြ? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပြီးနောက် NAc အတွက် FosB စုဆောင်းခြင်းတည်မြဲ-ရှည်လျားမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်း NAc D1R လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်။ အလှည့်၌, NAc ၌ဤ D1R-mediated? FosB upregulation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသည်ဤရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ် (အိုးထဲကနေ abstinence တဲ့ကာလပေါ်မှာမှီခိုနေကြသော်လည်း, Amph များအတွက်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်နှင့် NAc အတွက်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆများအတွက်အရေးပါဖြစ်ပြခဲ့ပါတယ် et al ။ , 2010a) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ NAc spinogenesis ထိခိုက် Amph ဆုလာဘ်၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်၏ကနဦးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါပြသပေမယ့် NAc အတွက်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆယာယီနှင့်တစ်ဦး7ဃပြီးနောက်ရှုလေ့လာဖြစ်သကဲ့သို့, တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များဆက်လက်စကားရပ်များအတွက်အရေးပါသည်မဟုတ်, ဃ, abstinence ကာလ 28 မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင် dopamine သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူစဉ်အတွင်း NAc အတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းလူသိများခဲ့ပြီး။ တစ်ဦးကျခံအမျိုးသမီး၏နိဒါန်းအပျေါမှာ, အ NAc အတွက် extracellular dopamine အဖော်ရှာစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် (Fiorino et al ။ , 1997) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမိတ်လိုက်နေစဉ် NAc သို့ dopamine အဲဒီ receptor ရန် infusing dopamine နှုန်း se ဆုလာဘ်အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတှငျပါဝငျမဟုတ်ကြောင်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်သို့မဟုတ် performance ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းပြသပေမယ့်အစား လိင်-related တွေကိုမက်လုံးပေး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့ (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998) ။ အဆိုပါ dopaminergic အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာဆဲလ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်သည် NAc အပါအဝင် mesolimbic dopamine ဆုလာဘ်စနစ်, အတွင်းအာရုံခံ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အကြောင်းမရှိ activation ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အမှန်စင်စစ်တွေကို (Balfour et al ။ , 2004) ။
ထပ်ခါတစ်လဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ induces? အလှည့်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်အားဖြည့် mediates သော NAc အတွက် FosB, (အိုး et al ။ , 2010b) ။ လက်ရှိရလဒ်တွေကိုမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်? FosB upregulation, အကယ်စင်စစ်, မိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက် D1R activation အပေါ်မှီခိုကြောင်းပြသပါ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant အုပ်ချုပ်ရေးဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့တိုးလာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်သနည်း FosB D1R ဖော်ပြ NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် (Lee က et al, 2006; ။ ။ Kim က et al, 2009) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော FosB upregulation (Zhang က et al, 1 ။ ) D2002R Activite အပေါ်မှီခိုကြောင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ, မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှု sensitized ၏ overexpression ခြင်းဖြင့်ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုမရှိခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်သနည်း D1R အတွက် FosB အဆိုပါ striatum အတွက်အာရုံခံဖော်ပြ (Kelz et al ။ , 1999) ။ ထို့ကြောင့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်တိုးမြှင့လော NAc အတွက် FosB ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေ sensitize တစ် D1R-မှီခိုယန္တရားကနေတစ်ဆင့်။
ထို့အပြင်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ကွောငျးတငျပွ? FosB သဘာဝကဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံနှင့် psychostimulant ဆုလာဘ်များအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ၏အရေးပါသောဖျန်ဖြေသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလော NAc အတွက် FosB လှုပ်ရှားမှုယခင်ကကဲ့သို့၎င်း, ထိခိုက်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှု်ပတ်သက်နေခဲ့သလော NAc အတွက် FosB overexpression ကြိုတင်စူးရှသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုအပြီးကိုကင်းဖို့ locomotor activation sensitizes (Kelz et al ။ , 1999), ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုတိုးပွားစေ (;, Zachary et al 1999 ။ ။ Kelz et al, 2006), နှင့်ကိုကင်းများ၏အနိမ့်ဆေးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် CPP က morphine (Colby et al, 2003 ။ ) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုကွောငျးဖျောပွသ မိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက် D1R သို့မဟုတ်? FosB လှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့လိင် Amph ဆုလာဘ်၏ာင်း experienceinduced ဖျက်သိမ်း။ T ကHUS, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတူတူပင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံမသာ, သူတို့ကအတူတူပင်မော်လီကျူးပြုပြီအပေါ်ဆုံ (Nestler et al, 2001; ။ Wallace et al, 2008; ။ Hedges et al, 2009; ။ ။ အိုး et al, 2010b), နှင့် NAc အတွက်တူညီတဲ့အာရုံခံအတွက်ဖွယ်ရှိ (Frohmader et al ။ , 2010b), ဆုလာဘ်နှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများ၏မက်လုံးပေး salience နှငျ့ "လို" သြဇာလွှမ်းမိုးရန် (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998) ။
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အနေဖြင့်တစ်ဦး abstinence ကာလ Amph ဆုလာဘ်များနှင့် NAc spinogenesis ၏ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က hypothesize? ဒီ abstinence ကာလအတွင်း FosB spinogenesis အစပျိုးခြင်းနှင့် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုပြောင်းလဲပစ်မှမြစ်အောက်ပိုင်းဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲနေဖြင့်အာရုံခံ function ကိုသာသက်ရောက်သည်။ တကယ်ပါပဲ, မိတ်လိုက်နေစဉ် NAc အတွက်လော FosB ပုသော induction ပိတ်ဆို့ခြင်းဆုလာဘ်နေကြပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် NAc အတွက်တိုးချဲ့ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတားဆီး။ ထိုမှတပါး, ကိုယ်တစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session ကိုရှေ့တော်၌ထို NAc သို့ D1R ရန်၏ nfusion? FosB နှင့်နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်တိုးတားဆီး။ ? FosB ကြောင်းအလှည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် NAc (Nestler, 2008) တွင် Synaptic ခွန်အား၌ may ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇတစ်ခုများပြားလှ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်မှတ်တမ်း Active သို့မဟုတ် repressor အဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသောကူးယူအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ? ကိုပိုပြီးတိတိကျကျ, FosB သိသိ-မှီခို kinase-5 မြှင့်လုပ်ဆောင် (။ Bibb et al, 2001; Kumar က et al, 2005 ။ ) နျူကလီးယားအချက်? B က (NF-? B က) (Russo et al ။ , 2009b), နှင့်အချိုမှု AMPA အဲဒီ receptor ၏ GluA2 subunit (Vialou et al ။ , 2010) နှင့်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇက c-fos (အိုး et al ၏ကူးယူ represses ။ , 2010b) နှင့် histone methyltransferase G9 (ဝင်္ et al ။ , 2010) ။ Cyclicdependent kinase-5 cytoskeletal ပရိုတိန်းနှင့် neurite outgrowth (တေလာ et al ။ , 2007) ထိန်းညှိ။ ထိုမှတပါး, NF-? B ကို NF- ၏တားစီးသော်လည်း, ထို NAc အတွက် dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်တိုးပွါး? B ကိုသက်ဝင် Basal dendritic ကျောရိုးနှင့်လုပ်ကွက်ကျောရိုးထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုး (Russo et al ။ , 2009b) ယုတ်လျော့။ မျိုးစုံပစ်မှတ်မှတဆင့် NAc ကျောရိုးသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါအရာ NAc အတွက်ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တိုး? FosB (ဆိုလိုသည်မှာသိသိ-မှီခို kinase-5, NF-? B) မှတစ်ဦးခြုံငုံအကျိုးဆက်ထိခိုက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကြောင်း NDအဖြစ် Russo et al အားဖြင့်တွေးဆခဲ့သည်။ (2009a) ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာမျှော်လင့်မထားသောလေ့လာရေးအတွက် NAc အတွက်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆယာယီဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်မဟုတ်တော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပြီးနောက် 28 ဃမှာရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင် Amph ဆုလာဘ်စတင်ခြင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်ကနဦးဖှံ့ဖွိုးတိုးတသို့မဟုတ်ထိခိုက် Amph တုံ့ပြန်မှုများ၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်အထောက်အကူပြုပေမည်။ သို့သော်ကိုယ့်ncreased ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကြာရှည် abstinence ကာလပြီးနောက်ထိခိုက် Amph ဆုလာဘ်တွေရဲ့ဇွဲဘို့မလိုအပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အရင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကဆုလာဘ် abstinence ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအပြီးတွင်အခြေခံအဆင့်ဆင့်သို့ပြောင်းသော NAc အတွက် NMDA အဲဒီ receptor subunit ရော်ဘာ-7 ၏ရေတိုရေရှည် (28, ဒါပေမယ့်မရ 1, ရက်အတွင်းနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်ပြီးနောက်) တိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပြခဲ့ကြ (အိုး et al ။ , 2012) ။ (2009, အိုး et al ။ ,; 2011, ဘရောင်း et al ။ ။ Huang က et al, 2012), နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေကြောင့်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဒါက NMDA အဲဒီ receptor စကားရပ်လိင်ကြုံတွေ့-သွေးဆောင်အသံတိတ် synapses ၏ညွှန်ပြဖြစ်တွေးဆခဲ့သည်တိုးလာ ကျောရိုးတိုးတက်မှုနှုန်း (Hamilton က et al ။ , 2012) တိုးမြှင့် NMDA အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှုသဘာဝဆုလာဘ် (လိင်) နှင့်အကျိုးကို abstinence ကာလအပေါ်မှီခိုနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်၏ crosssensitization မီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပြင်ဤအမူအကျင့် plasticity အဆိုပါ NAc အတွက် D1R activation မှတစ်ဆင့်လား? FosB ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ဒေတာဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်သဘာဝဆုလာဘ်ဆုံးရှုံးမူးယစ်ဆေးစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ပါစေနှင့်ဤတိုးမြှင့်အားနည်းချက်များထဲမှဖျန်ဖြေ? FosB နှင့်၎င်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းပစ်မှတ်ကြောင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။